Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » The Groton Inn: ny trano fandraisam-bahiny tranainy indrindra tany Amerika dia namerina tamim-pahagagana tamin'ny vanim-potoana vaovao
Migis Hotel Group dia handray hotely fandraisam-bahiny vaovao miaraka amin'ny fananany fananana sivy manokana miaraka amin'ny fanokafana ny The Groton Inn amin'ny 3 Mey 2018. Any amin'ny Main Street mahafinaritra any Groton, MA ary 35 kilaometatra miala an'i Boston, ilay 60- tsara fanahy. Ny trano fandraisam-bahiny dia vonona ny ho lasa iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny voalohany any New England.
Ny trano fandraisam-bahiny tranainy indrindra nataon'i America, ilay rafitra tany am-boalohany (tamin'ny taona 1678) dia nopotehin'ny afo tamin'ny 2011 ary namboarina indray tamin'ny fomba feno saina sy eritreritra, naka aingam-panahy avy amin'ny maritrano New England malaza sy ny tantaran'ny fanjanahantany manan-karena ao amin'io faritra io. Avy amin'ny lavarangana fidirana lehibe mankamin'ny fidirana amin'ny kitay hazo eo am-patana lobi, ny trano fandraisam-bahiny dia manome fiononana sy serivisy vaovao ho an'ireo mponina eo an-toerana, mpivarotra raharaham-barotra sy fialam-boly ary ireo izay mitsidika an'i Lawrence Academy sy Groton School. Ny trano fandraisam-bahiny koa dia eo akaikin'ny tobin'ny teknolojia akaiky, orinasa, andrim-panjakana ary fialamboly ivelany.
"Faly izahay fa mitondra ny The Groton Inn ao amin'ny portfolio misy anay," hoy i Phil Kronenthal, talen'ny Operations an'ny Migis Hotel Group. "Ekenay ny maha-manan-tantara an'io toerana io, ary manaja izany tsy fivadihana izany ny hotely vaovao ary reharehantsika ny fampiasa sy ny fenitra serivisy manerantany amin'ny marika Migis. Manantena ny ho tonga anisan'ity vondrom-piarahamonina ity izahay ary manan-kaja amin'ny fitantanana ity fananana manokana ity amin'ny vanim-potoana manaraka. ”
Ny haingon-trano ara-tantara avy amin'ny trano fandraisam-bahiny dia mampiseho paleta miloko miavaka, fampitaovana varahina, gorodona vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana vita sokitra, ary antsipirian'ny vanim-potoana. Ny efitrano fandraisam-bahiny malalaka dia tsy mijery ny mason'ny pastôrista ary tsara toerana miaraka amin'ny faritra miasa sy ny fividianana lafo vidy. Ankafizin'ny vahiny ny sakafo maraina fisakafoanana feno maraina, ny WIFI maimaim-poana, ny tobim-panatanjahan-tena manara-penitra, ary ny tokotany tsara tarehy voaravaka am-patana. Efitra fanasana manokana sy fanasana manokana sy efitrano fandraisam-bahiny manokana misy efitrano fandraisam-peo / sary feno, miaraka amin'ireo habaka ivelany malalaka, manome toerana manaitra ho an'ny hetsika sosialy sy orinasa.